5 zvikonzero TikTok kushambadzira ndiyo nzira yekuenda nayo kune bhizinesi rako - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
5 zvikonzero TikTok kushambadzira ndiyo nzira yekuenda kune yako bhizinesi
TikTok ndiyo ichangoburwa evanhu vezvenhau chikuva uye chatora nyika zvachose nedutu. Iyo ine vanopfuura mamirioni mazana matanhatu vashandisi pasi rese uye inozivikanwa zvakanyanya. Iyo inonakidza app yakura kuita hombe munguva pfupi. TikTok izere vhidhiyo-yakavakirwa uye iyo app inobvumira vashandisi kurekodha uye kugadzirisa mavhidhiyo uye kuaisa muapp. Iyi puratifomu inonyanya kushandiswa nevadiki vanoumba ruzhinji rwevashandisi. Kune dzakawanda nharaunda dzakasimba paTikTok uye inopfuura yekungovaraidza app. Zvinhu zvakawanda zvinoenda kuhutachiona paapp kubva kumavhidhiyo ekutamba kusvika kumakwikwi emakwikwi uye chokwadi chekuti gutsikana inogona nyore kuenda kuhutachiona inoita iyo inofanirwa-kushandisa app yekushambadzira brand yako kana bhizimisi. Ichi chinyorwa chichaenda zvakadzama.
TikTok inozivikanwa kwazvo evanhu vezvenhau chikuva uye poindi yeiyi chikuva kuwana vateveri vazhinji. Iwe unogona kana Tenga TikTok vateveri kuburikidza nemasevhisi akadai seTokUpgrade, kana iwe unogona kungoshandisa iyo app zvinowirirana uye kukura vateereri vako nenzira. TikTok ine yakafara uye yepasi rose vateereri ino penya kushambadzira nekuti muganho wehuwandu hwevanhu vaunogona kusvika wakakwira uye iwe unogona kubata mune akawanda niches nenharaunda kuti uwane vateereri vako uye uwane vateveri. Iwe hausi kungoda vateereri vemuno, iwe unoda kusvika kune vateereri vepasirese kuti uwedzere ruzivo rwechiratidzo pamwe nekusvika kwako.
Zvekare, zvechinyakare kushambadza zvazova zvechinyakare uye zvigadzirwa uye mabhizinesi ave kushandisa evanhu vezvenhau kuzvishambadza ivo pachavo uye zvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Izvi zviri kukanganisa zvachose iyo Marketing nzvimbo. TikTok ndiyo nyowani evanhu vezvenhau papuratifomu uye haina kurongeka izvo zvinowedzera kukwidza. Iwe haugone kutengesa zvakaoma papuratifomu iyi, haina kuita zvakanaka. Pane kudaro, tengesa organically, kugadzira, uye nekuvaraidza. TikTok ipuratifomu inosimudzira chokwadi saka iwe uchawana kubva pakuve iwe uye kugadzira zvine hutano gutsikana kuti upedzwe nevateereri vako. Gara uchinakidzwa uye uchivaraidza nekuti vanhu vanoshandisa TikTok kana vafinhwa.
Mavhidhiyo ndiwo akanakisa ekushandisa kushambadzira. Inoita zvirinani kupfuura mifananidzo kana zvinyorwa. Vanhu vanoda mavhidhiyo nekuti vari kuita uye kuvaraidza uye ndosaka TikTok yakura zvakanyanya. Ichi chinhu chinobatsira mabrands nemabhizinesi anoda kushandisa TikTok kushambadzira nekuti zvese zvavanoda zviri pamunwe wavo. Mabhizimusi uye mabhizinesi anogona kugadzira nekugadzirisa mavhidhiyo paTikTok uye vashandisi vanozoishandisa kana ichivaraidza.
Tumira ma hashtag ako
MaHashtag ishoko kana nhevedzano yemazwi anotanga ne “#” chiratidzo. Kana vakashandiswa, vanoisa mumapoka gutsikana zvichibva padingindira kana kuti imwe nyaya. Paunoshandisa hashtag, unoita kuti zvinyorwa zvako zvinyatsooneka uye zviwanikwe izvo zvinowedzera kusvika kwako uye kusuma gutsikana kune vateereri vakawanda vanogona kuenzana nevateveri vakawanda. Iwe zvakare une sarudzo yekugadzira ma branded hashtag inova yako yakasarudzika hashtag iyo yakasarudzika kune yako. bhizimisi kana brand. Paunogadzira hashtag ine mhando, iwe unoumba nharaunda uye unokwanisa kuona izvo vanhu vari kufunga nezve yako brand kana bhizimisi nekutsvaga hashtag.
Maitiro anoita zvakanyanya paTikTok uye zvinhu zvinoenda kuhutachiona nekukurumidza pane iyi app. Mamwe maitiro ane mukurumbira paTikTok anosanganisira iyo silhouette dambudziko, zvisikwa zviyo zvinonetsa uye bhazi Rinodenha. Madhanzi, skits uye kunyange manzwi anogona kuenda kuhutachiona paTikTok. Trends mukana werudzi rwako kana bhizimisi kuenda kuhutachiona hunobatsira iwe nekuti inowedzera kusvika kwako uye inowedzera vateereri vako izvo zvinogona kutungamira kune vakawanda vateveri uye vangangove vatengi.
Sezvo a bhizimisi, unofanirwa kunge uchishambadzira paTikTok. Iyo inonakidza, inovaraidza, yekugadzira nzvimbo, uye pamusoro payo zvese, haina mutengo uye inoshanda kushambadzira papuratifomu iyi. TikTok yakanaka nekuti vanokupa zvese zvaunoda zvinosanganisira makuru-mu-app ekugadzirisa maficha kuita yako vhidhiyo pop. Kune vateereri vakawanda paTikTok uye unogona wana boka rose revateveri vatsva nekuita kushambadzira kwechokwadi, uchishandisa mavhidhiyo ane simba kwazvo paapp, uye kushandisa ma hashtag nemaitiro.
Kushambadzira kweDhijitari - Iko Kukuru Kwevanhu Kufurira muna 2021
Dzazvino Kushambadzira Maitiro Ekusimbisa Yako Brand